ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်က အလေးချိန် တန် ၂ဝဝ ကျော်ရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးကြီးကို တွေ့ရစဉ်
Photo: Shan Gyi (facebook)
နိုင်ငံတော်နဲ့ ရတနာတောင်တန်း ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီတို့ အကျိုးတူဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဖားကန့် မက်လင်ချောင် အကျိူးတူ (၂) လုပ်ကွက်ကရတဲ့ တန်ချိန် ၂၁၀လောက်ရှိတဲ့ လုံးစွပ်ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးကြီးကို ခွဲစိတ်ပြုပြင် ပြီး မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲမှာ ပြသရောင်းချပါမယ်။
ဒီကျောက်စိမ်းတုံး တူးဖော်ချိန်မှာ လျှိုနာတွေပဲ့ထွက်လို့ ၁၇၄ တန်လောက်ရှိတဲ့ အပိုင်းအပါအဝင် အစိတ်အပိုင်း ၆ ပိုင်း လည်း ကွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအရိုင်းတုံးဟာ မြန်မာ့လုံးစွပ် ကျောက်စိမ်းသမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ သန်းလောက်နဲ့ ညီမျှတဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ သန်း ၇၀၀၀ လောက်တန်မယ်လို့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းက ဥက္ကဌအဖြစ်ပါဝင်တဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်က ရတနာခွန် ငွေကျပ် သန်းတထောင်ကျော်ရရှိမယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
အခွန်အခတွေ ပေးသွင်းပြီးရင် အကျိုးတူစာချုပ်အရ နိုင်ငံတော်က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကုမ္ပဏီက ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲမှာ ပြသရောင်းချပြီးတဲ့အခါ နိုင်ငံတော်က အထူးကုန်စည်ခွန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပြပွဲဝန်ဆောင်ခ ၃ ရာခိုင်နှုန်းပါ ရရှိပါမယ်။
ရတနာတောင်တန်းကုမ္ပဏီဟာ သဘာဝသယံဇာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အကျိုးတူကျောက် စိမ်းတူးဖော်နေတာလို့ ဧရာဝတီသတင်းမှာ ပါရှိပါတယ်။
ဒီကျောက်စိမ်းတုံးကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆ သန်းတန်မယ်လို့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းက ခန့်မှန်းပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ အကဲခတ်တွေက ဒေါ်လာ သန်း ၁၇၀ ထိတန်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တန် ၃၀၀ ကျော် ကျောက်စိမ်းကို ကျပ် ၁၀ ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးသတ်မှတ်
Who was responsible for valuation of that 200 tons Jade? Most of Jade merchant in Burma have the value calculated on weight and not on quality estimate US $ 150 millions. The Jade value will be increased after the cut because there will be coming out high quality Jade in that 200 tons jade. They said the US $6millions valuation was very low and obviously the corruption in the government’s Myanmar Gems Enterprise was gone yet. Burmese Government must investigate that 200 tons valuation process and must take action against whoever involved dishonestly undervaluation of this 200 tons Jade.
Oct 27, 2016 01:43 PM